आज सोमबार पशुपति नाथको दशन गरि तपाईंको रासिफल हेर्नुस्
August 23, 2020 August 23, 2020 adminLeaveaComment on आज सोमबार पशुपति नाथको दशन गरि तपाईंको रासिफल हेर्नुस्
आज २०७७ भदौ ७ गते आइत’बार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरु’को दै`निकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भवि’ष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आ’जको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फ,लादेश गर्नुभएको छ-
आज २०७७ भदौ ७ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्र’मा जन्म समय अनुसार फ`लादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्य’वाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योति’षी एस्ट्रो राजले यस्तो फ`लादेश गर्नुभएको छ-
सोखले ख`र्च बढाए पनि मनपर्ने भौ’तिक साधन जोड्ने समय छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन(अध्याप’नको क्षेत्रमा प्र`गतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ । लगानी बढाउनुपरे पनि व्यवसाय था`लनी हुनेछ। प्रेम’को बन्धन कसिनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखा`रता ल्याउनेछ। अतिथिका रूपमा स`त्कार पाइनेछ। तर कामको स`न्दर्भमा विवा’दास्पद जि’म्मेवारी व`हन गर्नुपर्ला ।
हाकिम, माता’पिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभा`वित तुल्याउन सक्छ । नो`करी अथवा व्यव’सायसँग सम्बद्ध कुनै ठोस परिणाम देखा पर्नेछन् । नयाँ यो`जना प्रा`रम्भ गर्न सकिनेछ । आ`यआ`र्जनका विविध स्रोत फेला पर्नेछन्। तर श्र`मको उचित मूल्यां`कन भए पनि प्रति’फलका लागि समय पर्ख’नुपर्नेछ। आँटेको कामको ल`गानी पनि अरूका लागि ख`र्च हुन सक्छ। सरसा’पटमा धन बाहिरिने देखिन्छ । आ`म्दानी रोकिनाले क`र्जाको रकम लिनुपर्ने हुन सक्छ। प्रग`तिमा ई`र्ष्या गर्नेहरूले अवरोध पुर्याउन सक्छन्।
पारि’वारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । सानो प्र`यासले नै काम बन्नेछ। सुन्दर पहिरनमा मन रमाउनेछ। आग`न्तुकहरूको उपहारले प्रस`न्नता मिल्नेछ। कामले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ। दुर्ग`मस्थान र टाढाको या`त्रा सम्भा`वना छ तर अनावश्यक या`त्राबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । पछिका लागि क`र्मफ`ल सञ्चय गर्ने समय छ। मेह`नतले अव`सर दिलाउनुका साथै दैनि`कीमा परिवर्तन आउनेछ। पहिलेको सफ’लताले उत्सा`ह जगाउनेछ।
परो`पकार र धा`र्मिक क्षेत्रमा ल`गानी गरेमा अझ राम्रो हुनेछ । रोकिएका काम सम्पा`दन हुनेछन् । कसैसंग सामान्य वि`वाद पनि हुन सक्छ । अध्यय’नमा प्र`गति हुनेछ । लगन’शीलताले संक`ल्प पूरा गर्न सकिनेछ। कमजोर नति`जा सच्याउन केही काम दोहो’र्याउनुपरे पनि मिहि`नेतले सम्मा`नित स्थान दिलाउनेछ । आलो`चकहरूले समेत प्र`शंसा गर्न थाल्नेछन्। प्रे`म र मित्र`ताको बन्धन कसि`लो हुनेछ । शुभचिन्त’कहरूको साथ प्राप्त हुनाले काममा उ`त्साह जाग्नेछ। बोलीको भ`रमा काम सम्पा`दन हुनेछ।
स`म्पूर्ण उ`द्यम र परि`श्रमको राम्रो प्रति’फल प्राप्त हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्र`भुत्व जमाउँदै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। तर अवसरका लागि विवा`दास्पद जिम्मे’वारी व`हन गर्नुपर्ला। शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्रति`स्पर्धा हुन सक्छ। तापनि मि`हिनेत गर्दा पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने अव`सर जुट्नेछ। हि`म्मत गर्दा प्रति`ष्ठित जि`म्मेवारी हातपार्न सफल भइनेछ। वि’शिष्ट व्यक्ति भेट्ने अव`सर जुट्नेछ। आँफूभन्दा वरिष्ठ व्य`क्तित्व अथवा पर्य’वेक्षकका साथमा अति सुम`धुर सम्ब`न्ध रहला।
कतै लामो दूरीको लाभ’दायी यात्रा गर्नु छ भने आज राम्रो हुन्छ । सामाजिक उत्त`रदा`यित्व वहन गर्ने समय छ । विश्वासपात्रबाट धोका हुन सक्छ, सजग रहनुहोला। निर्णय लिएर पनि शं`का गर्ने बानीले पछि परिनेछ। परिस्थि’तिअनुसार चल्न नस`क्ता दु`स्ख पाइनेछ । मह`त्त्वाकां`क्षी यो`जना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्यासउन सक्छन्। अरूको फाइदाका लागि उप`योग भइने स`म्भा`वना छ। मान्यज’नको मन जित्ने प्रय`त्न गर्नुहोला।
नयाँ काम र जिम्मे’वारी हात पार्ने मौका छ । पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ । आर्थिक प`क्ष सबल छ । आक~स्मिक ख`र्चले अर्थ अ`भाव देखापर्न सक्छ। आफन्तबाट टाढिनुपर्ला। व्यव’सायमा ल`गानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। ला`भप्रद कामले लो`भ्याए पनि फ´जुल ख`र्च हुन सक्छ। अव`सरका लागि क`डा परि`श्रम गर्नुपर्ला। देश–विदे`शको या`त्रा गर्ने प्रक्रि`या अघि बढ्नेछ । छर–छिमेकमा अस’मझदारी देखिनेछ भने बेसुरको काममा अलम`लिनुपर्ला। स्वा`स्थ्यमा सम`स्या दे`खा पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक प`क्ष सु`दृढ बन्नेछ । न्यायिक, कानुनी वा प्रतियो`गितात्मक क्रियाक’लापमा विज`य प्राप्त हुनेछ । मनमा दो`धारको अवस्था सि`र्जना हुनसक्छ । प्रतिस्पर्धाले नयाँ अव`सर दि`लाउन सक्छ। ज`टिल काम समेत सम्पादन हुनेछ । पुरु`षार्थद्वारा प्रतिस्पर्धी’हरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। पहिले दु`श्मनी गर्नेहरूले पनि मित्र`ताका हात अघि बढाउनेछन्। काम पूरा नभए पनि आं`शिक ला`भको स`म्भा`वना।
अध्या`त्मभा`व जा`गृत हुनाले परोप’कारमा मन जानेछ। धेरैले कामको तारिफ गर्नेछन्। शुभचि`न्तकहरूले साथ दिनाले पहिलेको चु`नौती समाप्त होला। दा`म, इना`म र प्रति`ष्ठा कमाउने बेला छ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने यो`ग छ । आ`र्थिक ला`भ प्राप्त होला । ठू`लाब`डाको आशी`र्वादले रोकिएको काम बन्नसक्छ । मेह´नतले पदीय जिम्मे’वारी दिलाउनेछ । विशेष अव`सर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले ह`र्ष बढ्नेछ। भाग्`यले विभिन्न अव`सर थमाउनेछ।
पारिवा’रिक वातावरण तपाईंको अनु`कूल नभए पनि नयाँ कामको प्र`स्ताव आउनेछ भने धन आ`र्जन हुनेछ। बेसुरमा दिइएको वच`नले अ`प्ठ्या`रो पर्नेछ। शरीरमा उ`त्सा`ह र उ`मङ्ग प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य स`बल रहनेछ र काममा पनि फा`इदाको यो`ग छ । चिता`एको काममा सोचेजस्तै सफ`लता मिल्नेछ। प्रे`म र मि`त्रताको ब`न्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसाय’को ल´गानीले मनग्गे धनला`भ हुनेछ। आलस्य त्यागेर मि`हिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रति`स्प`र्धीहरूले समेत सह`योगका हात फैलाउनेछन्। नयाँ काम प्रार`म्भ गर्ने समय छ।
सम`स्या दर्साउँदा सहयोगी’हरूको समेत साथ प्राप्त हुनेछ। काम पू`र्ण नभए पनि प्रय`त्न गर्दा आं`शिक ला`भ अवश्यै हुनेछ।क`ल्पना र भा`वनामा के`न्दित भइने छ । बोलीको विप`रीत अर्थ लाग्न सक्छ, मुखलाई निय`न्त्रणमा राख्नुहोला । चुनौ`तीपूर्ण जिम्मे`वारी व´हन गर्नुपरे पनि बुद्धि–विवेकले काम गर्न सकिनेछ। अ`प्ठ्यारा परि`स्थितिसँग सम्झौ`ता गर्नुपरे पनि आ`त्मवि`श्वास, मि`हिनेत र लगनशी’लताले ल,क्ष्यमा पुर्या्उनेछ।
पढाइको ल,गावले बौ`द्धिक क्षेत्र फरा’किलो बन्नेछ र लेखन कलामा निखा`रता आउनेछ। अध्ययनका लागि भ्रम`णको मौका जुट्न सक्छ । व्यापारमा सामान्य फाइदा भए पनि पशुपालन र कृषि क्षेत्रबाट राम्रो ला`भ हुनेछ । रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अ`ग्रसर भइनेछ। पढाइलेखाइमा प्रग`ति हुनेछ । बौ`द्धिक प्रति`स्प’र्धामा सफलता हात पर्ला । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो ला`भ मिल्ने यो`ग छ । प्रति`ष्ठित काम गर्ने अव`सर प्रा`प्त हुनेछ । दिन उत्सा’हपूर्ण रहनेछ ।
घर फर्कने नेपालीको ख`र्च ६३ हजार देखि ३ लाख सम्म……हेर्नुहोस् ।
भदौ ९ गते मंगलबार, गणेश भगवानको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोस्